Shabaab oo dad shacab ah ku dilay Jubbada Hoose | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Shabaab oo dad shacab ah ku dilay Jubbada Hoose
Shabaab oo dad shacab ah ku dilay Jubbada Hoose
Kismaayo(SONNA) Maleeshiyada Alshabaab ayaa lagu soo warramaya in dad shacab ah ay ku dileen deegaano katirsan Gobolka Jubbada Hoose,xili ay ku guda jireen raadinta nolol maalmeedkoodi.
Wararka ka imaanaya Deegaanka Yaaqbuul oo hoostaga Jasiiradda Kudhaa ee Gobolkaasi ayaa sheegay in Alshabaab ay halkaasi ku dileen 2 qof oo kamid ah dadka ka xamaasha jarista dhirta Dhuxusha laga sameeyo.
Dadka Deegaanka ayaa SONNA u sheegay in Maleeshiyaadkaasi ay soo weerareen,islamarkaana ay dileen 2 qof oo ku howlanaa dhir jarista.
“Walaal waxaa halka soo weeraray Alshabaab 2 qof ayay dileen, qof wuxuu ahaa nin halkaasi ganacsi ku lahaa iyo kan kalana wuxuu ahaa shaqaale marka goobtaasi ayay ku dileen,waxay diidayaan in xogtoodi la helo kadib la duqeeyo iyo in dhirta ayku dhuumaalaysanayaan dhamaato,meeshu waa meel duur ah, iyaga ma ogola dadka kale in ay noloshooda maareeyaan,taasi way ka soo horjeedaan”, Sidaasina waxaa SONNA u sheegay qaar kamid ah dadkii la kulmay dhibaatooyinka SHabaab.
Falalka ayaa inta badan ka dhacay deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan Maleeshiyada Shabaab,iyagoo taasi ay uga hortagayaan in la helo macluumaad ku saabsan keymaha ay ku jiraan,waxaana taasi ay ku dareen siinaysa cabsida ay ka qabaan Ciidanka Xoogga Dalka iyo Xulufada Saaxiibada la ah.
Previous articleGantaalkii ugu dambeyeey oo ridda dheer oo ay tijaabinayso Pyonyang
Next articleSuudaan oo soo dhaweysay cunaqabateyntii uu ka qaaday Mareykanka